Video Controller ကားမောင်းသူကဘာလဲ။ - အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အဓိက > အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ > Video Controller driver - မေးခွန်းများအတွက်အဖြေများ
Video Controller driver - မေးခွန်းများအတွက်အဖြေများ
Video Controller ကားမောင်းသူကဘာလဲ။
TO သို့ဗွီဒီယိုမျက်နှာပြင်Controllerကွန်ပျူတာမော်နီတာအတွက် output ကိုထုတ်လုပ်ပြီး၎င်းသည်လိုအပ်သည်ဗီဒီယို controller ကိုယာဉ်မောင်းဟာ့ဒ်ဝဲချိတ်ဆက်ရန်ကွန်ပျူတာဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရေး subsistem မှတဆင့်ကိရိယာနှင့်ဆက်သွယ်မှုရန်။
Device Manager တွင်ဗွီဒီယိုထိန်းချုပ်ခလုပ်ကိုကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲ။
Inစက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ, ပေါ်တွင် right-click လုပ်ပါစက်ကိရိယာနှင့် context menu ပေါ်တွင် Uninstall ကိုရွေးချယ်ပါ။
pop-up ၀ င်းဒိုးတစ်ခုကသင်အားဖယ်ရှားခြင်းအတည်ပြုပေးရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါ။
ကွန်ပျူတာကို Restart လုပ်ပါကားမောင်းသူအလိုအလျောက်။
Video Controller Driver ကိုဘယ်လို enable လုပ်မလဲ။
Device Manager ကိုသွားပါ။
Intel ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါဂရပ်ဖစ် controller ကို။
ကျွန်ုပ်၏ video controller driver ကိုဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်မလဲ။
ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ဒရိုင်ဘာကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပါWindows7မှာ
သင်၏ desktop ပေါ်ရှိ Computer icon ကိုညာဖက်နှိပ်ပြီး Properties ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင့်အတွက် entry ကို double-click လုပ်ပါဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့်အကူးအပြောင်းယာဉ်မောင်းtab ။
Windows 10 အတွက် Video Controller driver ကိုဘယ်မှာရရှိနိုင်ပါသလဲ။
ဗီဒီယိုကဒ်ထုတ်လုပ်သူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့၊ သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်လက်ပ်တော့ထုတ်လုပ်သူ၏ site ကိုသွားပြီး Windows အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဗွီဒီယိုထိန်းချုပ်စက်ဒရိုင်ဘာကိုရှာ။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ သင်ရွေးချယ်သည့်ယာဉ်မောင်းသည်သင်၏လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်လိုက်ဖက်ကြောင်းသေချာပါစေ။ ဆိုလိုသည်မှာ 32-bit Windows 10 အသုံးပြုသူများသည် 64-bit မဟုတ်ဘဲ 32-bit Windows 10 အတွက်ရည်ရွယ်သော driver ကို download လုပ်သင့်သည်။
Windows 10 မှာ Video Controller ပြvideoနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
Windows 10. Video Controller Driver ပြIssueနာကိုလွယ်ကူစွာဖြေရှင်းပါ။ 1 Device Manager တွင်၊ ထိုစက်ပေါ်မှညာခလုပ် နှိပ်၍ ဒေါင်းလုပ် (Contin) menu ပေါ်ရှိ Uninstall ကိုရွေးချယ်ပါ။ ၂ pop-up ၀ င်းဒိုးသည်သင့်အားဖယ်ထုတ်ခြင်းအတည်ပြုရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါ။ ၃။ သင့်ကွန်ပျူတာကို Restart လုပ်ပါ။ Windows သည် driver ကိုအလိုအလျောက် install လုပ်လိမ့်မည်။ နောက်ထပ် ...
Windows 10 ဗီဒီယိုကဒ်ဒရိုင်ဘာကိုမည်သည့်နေရာတွင် download လုပ်ရမည်နည်း။
ယာဉ်မောင်းကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ။ Windows 10. အတွက်နောက်ဆုံးပေါ် display driver ကို download လုပ်ရန်အတွက် PC ထုတ်လုပ်သူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကဒ်ထုတ်လုပ်သူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အမှတ်တံဆိပ်ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုနေပါက၎င်းတို့ကိုကားမောင်းသူကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အတွက်ပထမ ဦး ဆုံး PC ထုတ်လုပ်သူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရန်အကြံပြုပါသည်။
ယာဉ်မောင်းကိုယ်တိုင် Update လုပ်ခြင်းဗီဒီယိုကဒ်ထုတ်လုပ်သူ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့မဟုတ်သင်၏ကွန်ပျူတာ (သို့) လက်တော့ပ်ထုတ်လုပ်သူ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များသို့ ၀ င်းဒိုးအတွက်နောက်ဆုံးဗွီဒီယိုထိန်းချုပ်သည့်ဒရိုင်ဘာကိုရှာပြီးဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ သင်ရွေးချယ်သောယာဉ်မောင်းသည်သင်၏လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်လိုက်ဖက်ကြောင်းသေချာပါစေ။